15ka ugu sarreeya Jaamacadda Stanford ee la xuso 2022
15ka ugu sarreeya Jaamacadda Stanford ee la xuso
Weligaa ma isweydiisay halka dad caan ah ay aadeen iskuulka? Aynu eegno Jaamacadda Stanford Qalinjabiyeyaasha la xuso si aan u ogaano madaxweynaha, jilaa, jilaa, saxafi, guuleystayaasha Nobel, iyo dadka kale ee caanka ah ee halkan ka qalin jabiyay.
Alumnus waa arday ka qalin jabiyay machad waxbarasho halka alumnus caan ah uu yahay khabiir qaran ahaan caan ah oo la aqoonsan yahay oo ku xeel dheer cilmiga tacliinta kaas oo daboolaya warbaahinta guud. Waxay si fudud u yihiin dad caalamku aqoonsan yahay oo ka soo qalin jabiyay machad waxbarasho oo si weyn wax ugu kordhiyay goobtii la aqoonsanaa.
Stanford waa jaamacad sare, waxay haysaa sharaf qaran iyo mid caalami labadaba iyada oo loo marayo waaxyadeeda waxbarasho waxay soo saartay qaar ka mid ah kuwa ugu wanaagsan adduunka dhinacyo kala duwan. Jaamacadda Stanford waa jaamacad cilmi baaris oo gaar loo leeyahay oo ku taal Stanford, California waxayna ku jirtaa kaalinta koowaad ee jaamacadaha adduunka ugu wanaagsan marka la daabaco tacliinta.
Stanford waxaa la aasaasay 1891 wuxuuna ku fadhiyaa 8,180 hektar oo dhul ah, wuxuuna diiwaangeliyaa in ka badan 17,000 oo arday. Machadku wuxuu u qaybsan yahay toddoba dugsi, oo leh saddex dugsi hoose oo ka kooban n40 waaxyo tacliimeed iyo afar dugsi xirfadeed oo ku takhasusay sharciga, daawada, ganacsiga, iyo waxbarashada.
Stanford waxay leedahay 84 abaalmarinood oo Nobel ah, 29 Turing Award Prize, iyo siddeed Field Medalists oo ah arday, ardaydii hore, macallimiin, ama shaqaale ilaa Abriil 2021. Qalinjabiyeyaasha Stanford waxay bilaabeen dhowr meheradood oo si wada jir ah u soo saara in ka badan $ 2.7 tiriliyan dakhli sannadeedkii oo ay shaqaaleysiiyaan 5.4 milyan oo qof laga soo bilaabo 2011, qiyaastii u dhiganta dalka toddobaad ee ugu dhaqaalaha weyn adduunka illaa 2020.
Jaamacadda Stanford waxay soo saartay hal madaxweyne oo Mareykan ah (Herbert Hoover), 74 maalqabeen oo badbaaday, iyo 17 cirbixiyeen. Sidoo kale waa soosaaraha ugu weyn ee Aqoonyahannada Fulbright, Aqoonyahannada Marshall, Aqoonyahannada Rhodes, iyo xubnaha Koongareeska Mareykanka.
1892, fasalka koowaad ee qalin -jabinta jaamacadda ayaa aasaasay Ururka Alumni Stanford. In ka badan 220,000 alumni Stanford ayaa hadda firfircoon.
Jaamacadda Stanford ee ugu sareysa qalin -jabiyayaasha waa;
Sterling Kelby Brown
Janet Zeph Briggs
Lawrence Edward Page waa mid ka mid ah aasaasayaashii Google sidoo kale waa ganacsade weyn, saynisyahan kombiyuutar, iyo ganacsade internet. Larry wuxuu ku dhashay Maarso 26, 1973, Lansing, Michigan, Mareykanka, wuxuuna shahaadada Michigan ka qaatay Jaamacadda Michigan iyo Master of Science iyo Ph.D. shahaadada Sayniska Kombiyuutarka ee Jaamacadda Stanford.
Waxaa laga yaabaa inaad taqaano Larry Page laakiin waad taqaan Google hadda waad ogtahay inuu yahay Jaamacadda Stanford ee ka qalin -jabisay.
Miyaadan ogeyn halyeeyga golf -ka caanka ah, Tiger Woods, wuxuu ka qalin jabiyay Stanford? Hagaag, hadda waad samaysaa oo isagu waa qalin -jabiyaha caanka ah ee Jaamacadda Stanford oo loo arko inuu yahay mid ka mid ah goleyaasha ugu weyn abid iyo mid ka mid ah ciyaartooyda ugu caansan taariikhda. Woods wuxuu helay deeq waxbarasho oo isboorti si uu u barto Dhaqaalaha Stanford 1994 wuxuuna ka qalin jabiyay 1996.
Ka sokow inuu aado Stanford si uu ugu barto dhaqaalaha, wuxuu sidoo kale halkaas u joogay inuu xoojiyo xirfadihiisa kubbadda cagta oo aan u oggolaan inuu fiiro gaar ah u yeesho waxbarashada laakiin wuxuu xoogga saaray golf -ka wuxuuna sii waday inuu ka mid noqdo goleyaasha ugu weyn taariikhda.
3. Sergey Brin
Google waxay leedahay laba aasaase, Larry Page iyo Sergey Brin oo is arkay intii ay wax ku baranayeen Stanford. Sababtoo ah ku biirintooda goobta internetka, labadoodaba waxaa loo aqoonsaday inay yihiin Jaamacadda Stanford Qalinjabiyeyaasha caanka ah. Sergey Mikhailovich Brin sidoo kale waa ganacsade Mareykan ah, saynisyahan kombiyuutar, iyo ganacsade internet.
Wuxuu dhashay 21st Bishii Ogosto 1973 -kii magaalada Moscow, Russia, markii dambana wuxuu yimid Ameerika isaga iyo waalidkiis carruurnimadiisii ​​hore. Sergey iyo Larry waxay kulmeen iyagoo ku sii wata barnaamijka shahaadada Masterka Jaamacadda Stanford.
Wilmot Reed Hastings Jr. waa maamulaha guud ee Netflix sidoo kale waa ganacsade Mareykan ah oo sidoo kale ka mid ah kuwa ugu sarreeya Jaamacadda Stanford ee la xuso. Wuxuu ku dhashay 1960 magaalada Boston, Massachusetts, Mareykanka, wuxuuna qoray dhowr buug si uu u caawiyo jiilka soo koraya.
Hastings wuxuu dhigtey Jaamacadda Stanford ka dib markii MIT loo diiday inuu sii wato Shahaadada Masterka ee Sayniska Kombiyuutarka, wuxuu ka qalin jabiyay 1988.
5. Sterling Kelby Brown
Sterling K. Brown waa jilaa Mareykan ah oo dhashay 1976 wuxuuna xiddig ku lahaa dhowr bandhigyo TV iyo filimo, oo ay ku jiraan ku dhawaaqidda jilayaasha kartoonnada ee The Angry Birds Movie iyo Frozen II. Waxqabadkiisa ayaa ku kasbaday aqoonsi caalami ah iyo sidoo kale Abaalmarinta Golden Globe iyo Abaalmarinta Primetime Emmy.
Kelby wuxuu markii hore rabay inuu barto Dhaqaalaha laakiin wuxuu jeclaaday jilitaanka wuxuuna go'aansaday inuu sii wato shahaadada jilitaanka taas oo ka heshay Bachelor of Arts oo uu ka qaatay Jaamacadda Stanford. Wuxuu ka mid ahaa 100 -ka Qof ee ugu Saamaynta badan 2018 ee majaladda Time. Sababtoo ah shaqadiisa iyo gacan ka geysashada goobta jilitaanka, iyo sidoo kale tirada abaalmarinnada uu ku guuleystay, Brown waxaa laga aqoonsan yahay Jaamacadda Stanford ee ka qalin -jabisay.
Peter Andreas Thiel sidoo kale waa mid ka mid ah kuwa ugu sarreeya Jaamacadda Stanford oo caan ku ah qalin -jabiyayaasha, wuxuu dhashay 1967 wuxuuna leeyahay dhowr shirkadood, oo ay ku jiraan inuu xubin ka yahay Facebook. Isagu waa ganacsade Jarmal-Mareykan ah iyo maal-gashade ganacsi, aasaasaha PayPal, Teknolojiyadda Palantir, iyo Sanduuqa Aasaasayaasha.
Thiel wuxuu ku dhashay Jarmalka laakiin waalidkiis waxay u guureen Mareykanka markii uu jiray kaliya hal sano. Markii dambe wuxuu ku bartay Falsafadda Jaamacadda Stanford wuxuuna ku qalin -jabiyay 1989 -kii isagoo haysta Bachelor of Arts wuxuuna sii watay shahaadada Juris Doctor sanadkii 1992 isagoo ka qaatay Stanford Law School.
Laura Jeanne Reese Witherspoon waa jilaa Mareykan ah, soo -saare, iyo ganacsade ku dhashay New Orleans, Louisiana, Mareykanka 1976. Waxay dhigatay Jaamacadda Stanford si ay ugu sii wadato suugaanta Ingiriisiga laakiin ma aysan dhammayn raadinta xirfadda jilitaanka.
Reese waxay heshay abaalmarino dhowr ah oo ay ku jiraan Abaalmarinta Akadeemiyada, laba Abaalmarin oo dahabi ah, Abaalmarinta Filimka Akadeemiyada Ingiriiska, Abaalmarinta Jilayaasha Guild Award, iyo Abaalmarinta Primetime Emmy. Waxay ka mid ahayd jilayaasha ugu mushaharka badan adduunka sannadka 2019 waxayna ka mid ahayd majaladda Time 100 Dadka ugu Saamaynta badan 2006 iyo 2010.
Herbert Clark Hoover waa 31 jirst madaxweynaha Mareykanka iyo mid ka mid ah kuwa ugu sarreeya Jaamacadda Stanford ee la xuso. Wuxuu ku dhashay Laanta Galbeed, Iowa, Mareykanka 1874 wuxuuna dhintay 1964, wuxuu kaloo ahaa ganacsade iyo injineer.
Wuxuu dhigtey Jaamacadda Stanford si uu u sii wato Bachelor of Art ee Geology wuxuuna qalin jabiyay 1895. Hoover wuxuu ka mid ahaa fasalka hormuudka ka ahaa Stanford, wuxuu ahaa khasnajiga fasalka, iyo maamulaha labada kooxood ee kubbadda cagta iyo baseball -ka.
9. Michael Cunningham
Michael Cunningham waa qoraa Mareykan ah waana mid ka mid ah kuwa ugu sarreeya Jaamacadda Stanford oo caan ku ah ardayda ka qalin jabisay shahaadada Suugaanta Ingiriiska. Buugiisa Saacadaha The wuxuu ku guuleystay abaalmarinta Pulitzer ee sheekooyinka iyo Abaalmarinta PEN/Faulkner 1999, wuxuu sidoo kale ku guuleystay abaalmarino kale sida qoraa iyo qoraa -shaashad.
Qoraaga wuxuu ku dhashay 1952 Don iyo Dorothy Cunningham wuxuuna hadda bare ka yahay qoraalka hal abuurka ee Jaamacadda Yale
10. Vint Cerf
Wuxuu ku dhashay Vinton Gray Cerf 1943kii New Haven, Connecticut, Mareykanka, ilaa Muriel iyo Vinton Thurston Cerf. Wuxuu had iyo jeer muujiyaa kartiyo gaar ah laga soo bilaabo da'da hore, intii uu ku jiray dugsiga sare wuxuu ka shaqeeyay Rocketdyne barnaamijka Apollo wuxuuna ka caawiyay qorista software falanqaynta tirakoobka ee tijaabooyinka aan burburin ee matoorada F-1.
Cerf wuxuu ka qalin jabiyay Jaamacadda Stanford isagoo haysta Shahaadada Bajlarka ee Xisaabta waxaana lagu daray liiska ugu sarreeya ee Jaamacadda Stanford. Waa hormuud internet -ka Mareykanka ah waxaana loo aqoonsaday inuu ka mid yahay "Aabayaasha internetka" kuwaas oo ku kasbaday abaalmarino badan oo ay ka mid yihiin Biladda Madaxweynaha ee Xorriyadda, Abaalmarinta Marconi, Abaalmarinta Turing, iwm.
11. Carl Wieman
Mid ka mid ah kuwa ugu sarreeya Jaamacadda Stanford ee la xuso waa Carl Edwin Wieman, wuxuu dhashay 26th Bishii Maarso 1951 magaalada Corvallis, Oregon, Mareykanka, waa fiisigis iyo aqoonyahan Mareykan ah oo ka qalin jabiyay Stanford. Sababtoo ah kaalintii uu ka qaatay cilmiga fiisigiska, waxaa la guddoonsiiyay abaalmarinta Nobel Prize ee Fiisigiska wuxuuna hadda Professor ka yahay Jaamacadda Stanford.
Wieman wuxuu qaatay Ph.D. laga bilaabo Stanford 1977.
12. Alfred Achebe
Nnaemeka Alfred Achebe waa mid ka mid ah kuwa ugu sarreeya Jaamacadda Stanford ee la xuso. Wuxuu dhashay 1941 wuxuuna ka qalin jabiyay Bachelor of Science degree Chemistry oo uu ka qaatay Jaamacadda Stanford sanadkii 1966. Waa hogaamiye dhaqameed iyo 21st Obi of Onitsha, Gobolka Anambra, Koonfur-Bari Nigeria. Achebe wuxuu sidoo kale ahaa madaxa Jaamacadda Ahmadu Bello tan iyo 2015 wuxuuna horay u ahaa madaxa Jaamacadda Kogi State.
Wuxuu sidoo kale ku lug leeyahay ganacsiyo badan oo ay ka mid yihiin inuu noqdo guddoomiyaha guddiga agaasimayaasha Unilever Nigeria iyo guddoomiyaha Breweries International.
13. Janet Zeph Briggs
Janeth Z. Briggs waxaa loo aqoonsaday inay tahay haweeneydii ugu horreysey oo ka heshay Jaamacadda Stanford shahaadada injineernimada macdanta. Ficilkani wuxuu ka dhigayaa mid aan la ilaawi karin wuxuuna ku qoran yahay kuwa ugu sarreeya Jaamacadda Stanford ee ka qalin -jabisay. Waxay dhalatay 1974 waxayna tahay macdanleyda mareykanka waxayna khabiir ku tahay molybdenum waxaana la galiyay hoolka macdanta qaranka ee 1989.
Intii ay wax ka baranaysay Stanford, waxay ahayd madaxweyne ku xigeenka naadiga duulista waxayna bartay duulista diyaaradaha iyada oo ka sii wadatay shahaadada injineernimada macdanta ee jaamacadda. Waxay ku dhimatay Tokyo 1974.
14. Dana Fox
Waxaa ugu caansan qoraaga Taariikhda Arooska iyo Maxaa ka dhacaya Vegas, Dana Fox waa qoraa shaashad Mareykan ah, waxay ku dhalatay 1976 magaalada Brighton, New York, Mareykanka. Sannadkii 1998 waxay ka qalin jabisay Stanford oo ay ka qaadatay Ingiriisiga iyo Taariikhda Farshaxanka.
15. Derek Bok
Wuxuu ku dhashay Derek Curtis Bok 1930 oo ku yaal Bryn Mawr, Pennsylvania, waa jaamacad caan ka ah Jaamacadda Stanford oo ka qalin jabisay jaamacadda 1951 isagoo haysta shahaadada Bachelor of Arts. Isagu waa garyaqaan Mareykan ah iyo aqoonyahan iyo 25th gudoomiyaha jaamacadda Harvard.
Kuwani waa kuwa ugu sarreeya Jaamacadda Stanford ee la xuso, waxaa jira kumanaan alumni oo ka socda Jaamacadda Stanford jidka, laakiin waad dhex mari kartaa Su'aalaha la isweydiiyo si aad u aragto inbadan oo ka mid ah qalin -jabiyayaashan.
Su'aalaha badanaa la isweydiiyo ee ku saabsan Jaamacadda Stanford Alumni
Qofkee caan ah ayaa galay Jaamacadda Stanford?
Waxaa jira kumanaan qof oo caan ah oo aaday Jaamacadda Stanford laakiin kuwa ka soo muuqda madaxweynihii hore ee Mareykanka waa John F. Kennedy oo halkaas wax ku bartay muddo kooban, wuxuu ka baxay barnaamijkiisii ​​MBA si uu waxyaabo kale u sameeyo. Qalinjabiyeyaasha kale ee xusid mudan waa Tiger Woods - mid ka mid ah ciyaartooydii ugu weynaa taariikhda - Sundar Pichai - Maamulaha Google ee hadda - iyo jilaa Reese Witherspoon.
Waa maxay Stanford ugu caansan?
Stanford waxaa sida ugu wanaagsan loogu yaqaanaa hay'ad cilmi baaris xoog leh gaar ahaan aagagga sayniska la adeegsado sida injineernimada.
JFK ma aaday Stanford?
JFK wuxuu dhigtey Jaamacadda Stanford si uu u sii wato shahaadada MBA laakiin wuu ka baxay ka hor inta uusan helin shahaadada.
Waa maxay jilayaasha caanka ah ee tagay Stanford?
Atariishooyinka caanka ah ee tagay Stanford waa Reese Witherspoon iyo Jennifer Connelly.
Jilayaasha caanka ah ee tagay Stanford waa Ted Danson, Fred Savage, iyo Andre Braugher.
18 Koorsooyin Bilaash ah oo Stanford ah oo wata Shahaadooyin
Sida Loo Helo Ogolaanshaha Mastersford Online Masters.
4 -ta ugu sarreeya deeqaha waxbarasho ee kubbadda cagta ee Mareykanka
4 Koorsooyinka Shahaadada Sare ee Bilaashka ah ee Bilaashka ah ee Bilaashka ah ee Shahaadooyinka wata
10 Koorsooyin Online ah oo Bilaash ah oo ka socda Singapore oo wata Shahaadada
15 Deeqda waxbarasho ee ugu sareysa ee Nigeria
20 Darajooyin Shahaado sharaf ah oo bilaash ah oo khadka tooska ah ah
Jaamacadda Stanford ee ka qalin jabisay ardayda
Previous Post:Shuruudaha Jaamacadda Regina | Khidmadaha, Barnaamijyada, Kulliyadaha, Darajooyinka
Post Next:10 Kulliyadaha ugu raqiisan Toronto Canada ardayda Caalamiga ah
Mawduuca WordPress: Wellington waxaa qoray Dulucda.